Nkwenkwe ndị Alakụba gbasara chi ọzọ-Akwụkwọ Nsọ
Ndị Alakụba na-ekwupụtara Chineke na Chineke bụ Allah.
Na Tiktok m na-ekwu maka Akwụkwọ Nsọ Chineke na Ọkpara ya Jizọs Kraịst, mana m na-abara ndị Alakụba mba na-ekwu na ọ bụ Allah bụ Chukwu. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ha na-agọnarị Chukwu nke Akwụkwọ Nsọ ma na-ekwupụta chi ọzọ nke Akwụkwọ Nsọ.
Kpụrụ okwukwe ndị Alakụba bụ ikwupụta okwukwe mmadụ na Allah dịka nanị chi.
Onye obula nke choro ibu onye Alakụba aghaghi ikwu okwu ndi a n’iru ndi aka-ebe abuo ndi Muslim:
"Ọ dịghị chi ma Allah na Muhammad bụ onye amụma ya."
Na nkwenkwe Muslim, onye Alakụba na-ekwupụta na Allah bụ Chineke.
Nkwenkwe ahụ na-eso onye Alakụba maka ndụ, a gbanyere ya na ntị nke ụmụ amụrụ ọhụrụ ma kwughachi ya na ọnwụ ahụ ga-aka ọkachasị site na onye Alakụba kwere ekwe kwa ụbọchị ma bụrụ akụkụ nke ekpere.
Anyị na-ahụ na Muslim n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ na ndị Alakụba anaghị ekwupụta na Akwụkwọ Nsọ Chineke, ma chi nke kor'an, Allah. Ọ dịghị ebe ọ bụla n’ime Akwụkwọ Nsọ kwuru na a na-akpọ Chineke Allah. Ha si otu a na-ekwupụta chi ọzọ nke Akwụkwọ Nsọ.
Chineke nwere Nwa
Chineke nke kor'an, Allah enweghị Ọkpara ọ mụrụ naanị onye O zitere ịzọpụta ụwa, mana Chineke nke Akwụkwọ Nsọ nwere Ọkpara - Jizọs Kraịst. Nke a bụ ihe akaebe ọzọ na ndị a bụ chi abụọ dị iche iche na Allah abụghị chi nke Akwụkwọ Nsọ.
Nsụgharị na-ezighi ezi
Rịba ama na okwukwe ahụ e hotara n’elu sitere n’asụsụ Arabic n’ụzọ ziri ezi. Ọ naghị ekwu:
"Ọ dịghị chi ma Chineke ma Muhammad bụ onye amụma ya."
Nsụgharị dị otú ahụ ka ọtụtụ ndị na-eme taa, mana ọ bụ ntụgharị na-ezighi ezi, gbagọrọ agbagọ na ụgha. Ọ bụrụ na mmadụ nwere ụdị ntụgharị asụsụ a, ọtụtụ nwere ike hiere ụzọ kwenyere na ọ bụ Chineke nke Akwụkwọ Nsọ.
N'otu aka ahụ, mgbe onye Alakụba na-ekwu "chi", ọ pụtaghị na Akwụkwọ Nsọ na Chineke kama Allah. Ebe ọ bụ na Allah bụ ihe ịrịba ama nke ịha nhata na Chineke nke Akwụkwọ Nsọ, ị nwere ike iche na ọ bụ otu chi, mana ọ bụghị.
Ọ bụ aghụghọ dị njọ iji tugharia nkwenye n'ụzọ na-ezighi ezi iji metụta uche ndị mmadụ na ọ bụ otu chi.
"Allah" bụ aha nke chi
Ugbu a onye na-ekwu na "Allah" pụtara "Chineke". Enwere ike itughari ya n'uzo di otua, mana okwu a bu "Allah" bu aha chi. Dịka ọmụmaatụ, a na-akpọ Chineke nke Akwụkwọ Nsọ NW LORD - YHWH. Ọ dịghị mgbe e dere na Bible na aha ya bụ Allah.
Mana ọ bụrụ na "Allah" pụtara "chi" gịnịzi kpatara okwu ọzọ dị n'ụkpụrụ okwukwe ji sị "chi" iji kwuo na Allah bụ chi?
"Ọ dịghị chi [ilah] ma Allah [Allah] na Muhammad bụ onye amụma ya."
Anyị si otú a hụ na nkwenye ahụ nwere okwu maka "chi" nakwa na "Allah" bụ aha maka chi.
Enweghi ike ịtụgharị ya na "Allah"
Anyị dere na ọ bụ ihe ọjọọ ịsụgharị okwukwe ahụ na "ọ dịghị chi ma Chineke", mana ọ dịkwa njọ ịsụgharị "enweghị Allah ma Allah."
Site na nke a, egosiri na "Allah" bụ aha ahụ na onye Alakụba na-ekwupụta n'ụzọ na-ezighi ezi na ọ bụ Allah bụ Chineke.
Jehova bu Chineke
Nkwuputa nke Akwukwo nso bu na obu YHWH bu Chineke, nke ndi Israel kwusara mgbe ha ghotara na Beal abughi Chineke.
1 Ndị Eze 18:21: "Elaija pụtara n'ihu mmadụ niile, wee sị, Ruo ole mgbe ka ị ga-akwụsị n'etiti echiche abụọ? Ọ buru na Jehova bu Chineke, jesonu Ya. Ọ bụrụ Bel, sowenụ ya. "Ma ndị Izrel azaghị ya okwu ọ bụla."
1 Ndi Eze 18:39: "Mgbe ndi Israel nile huru ya, ha we da kpue iru-ha n'ala: ha we si, Jehova bu Chineke. Ọ bụ Jehova bụ Chineke! "
Zọpụtara ma zọpụta
Ka a ga-azoputa na-azoputa, New Testament nke Bible na-ekwu na onye ga-ahụ ekwupụta na ọ bụ Jizọs bụ Onyenwe anyị.
Ndị Rom 10: 9. N'ihi na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta 'Jizọs bụ Onyenwe anyị,' ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie, a ga-azọpụta gị.
Enyi m, nabata Jizọs ma kwuputa ya dịka Onyenwe anyị. Mgbe ahụ ị ga-azọpụta na-azọpụta.
Ọ bụ Jehova bụ Chineke.
Vecka 19, lördag 15 maj 2021 kl. 03:46